4:57 PM Posted In Forward mail Edit This0Comments »
တခါတုံးက အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဆီမှာ သူမ ရေခပ်တိုင်း သုံးလေ့ရှိတဲ့
အိုးကလေးနှစ်အိုးရှိတယ်တဲ့ ။ အိုးတစ်အိုးက စင်းလုံးချောကောင်းမွန်လှပပြီး
ကျန်တစ်အိုးကတော့ အက်ရာလေးနဲ့ အပြစ်အနာအဆာ အနည်းငယ်ရှိသတဲ့ ။
အမျိုးသမီးကြီးက အဲ့ဒီ အိုးနှစ်လုံးကို ၀ါးပိုးတဖက်တချက်မှာ ချိတ်ပြီး
စမ်းချောင်းမှာ ရေသွားငင်လေ့ရှိတယ် ။ အိမ်ရောက်တဲ့အခါ အိုးကောင်းတစ်လုံးက
ရေအပြည့်ပါပေမဲ့ ကျန်တစ်အိုးကတော့ ရေတွေ စိမ့်ကျကျန်နေခဲ့တာနဲ့ ရေတ၀က်ပဲ
အဲ့တော့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့အိုးလေးက သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ်
သူ့ကိုယ်သူ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေချိန်မှာ ကျန်တဲ့အိုးကလေးကတော့
နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက် တနေ့မှာ အမျိုးသမီးကြီး
စမ်းချောင်းမှာရေခပ်နေတုံး အနာအဆာရှိတဲ့ အိုးကလေးက သူ့သခင်မကို ပြောသတဲ့
.. "ငါ နင့်အတွက် ဘယ်တော့မှ ရေအပြည့် မသယ်ပေးနိုင်တာကို တွေးမိတိုင်း
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို ငါ့ကိုယ်ငါလဲ ရှက်မိတယ်" လို့ ပြောတော့
အမျိုးသမီးက သူ့ကို ပြုံးကြည့်ပြီး "ငါတို့ ရေခပ်ရာလမ်းတလျှောက်
နင်ရှိတဲ့ လမ်းဘက်ကပဲ ပန်းပင်လေးတွေပေါင်းစုံ ဝေဆာလှပနေတာကို
နင်သတိထားမိလား" လို့ ပြန်မေးတယ် ။ ပြီးတော့ ဆက်ပြောတယ် ။
"နင့်မှာရှိတဲ့ အဲ့ဒီအားနည်းချက်တစ်ခုကို ငါသတိထားမိလို့ ရေခပ်တဲ့
လမ်းတလျှောက် နင့်ဘက်အခြမ်းမှာ ပန်းမျိုးစေ့လေးတွေ ငါကြဲထားခဲ့တယ် ။
နင်အမြဲ ရေလောင်းခဲ့တဲ့ မျိုးစေ့လေးတွေဟာ အခု အဲ့ဒီလမ်းက
ပန်းဥယျာဉ်လေးပဲပေါ့ ။ ငါ့အိမ်က ပန်းအိုးတွေက ပန်းတွေလဲ အဲ့ဒီ
ဥယျာဉ်လေးကပဲ ငါခူးခဲ့တာလေ ။ နင့်ကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် အဲ့ဒီ လမ်းက
ပန်းပင်လေးတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်သလို ငါ့အိမ်ကလေးကိုလဲ အခုလို
ပန်းပေါင်းစုံ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ဘယ်အလှဆင်နိုင်ပါ့မလဲ" တဲ့ ။
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် အားသာချက် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ် ။ ခြွင်းချက်မရှိ
ရာနှုန်းပြည့် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံနေတဲ့ လူသားရယ်လို့ မရှိကြပါဘူး။
အက်ကြောင်းတွေနဲ့ အိုးကလေးကတောင် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ လောကကို
အလှဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် လူသားတွေလဲ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့
အားနည်းချက်လေးကို သတိပြုဆင်ခြင်မိတဲ့အခါ စိတ်ပျက်အားငယ်နေမဲ့ အစား
လောကကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တတ်နိုင်သမျှ အလှဆင်ပေးနိုင်ကြပါတယ်လို့
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု ရှိစေချင်ပါတယ် ။
3:25 PM Posted In Joke Edit This0Comments »
အဲ့ဒီနေရာမှာ ဘုရင်မရှိတဲ့အခါကျတော့ ခုဏလူတွေ အားလုံးပေါင်းပြီး
အဲ့ဒီလို နဲ့ အမိုက်ဆုံး နဲ့ ညဏ်ပညာမရှိဆုံး တယောက်က ဘုရင်ဖြစ်လာပါလေရော့လား.
ငါးမူးနဲ့ ပဲ ရောင်းခိုင်းတော့တယ်။ သုဟာသူ အပြင်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးများများ
သုနိုင်ငံမှာတော့ ငါးမူးပဲ. တပွဲ ကို ၈၀၀ကျပ် လောက်ဈေးရှိတဲ့ ထမင်းကစားငါးမူး ပဲပေးရတယ်။
့သုရဲ့ အထူးချွန်ဆုံး တပည့် လည်ရင်းပတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံ
ရောက်လာကြတာပေါ့။ ဆရာ တော့အဲ့ဒီဒေသ ကို သိပ်သဘောမတွေ့ ဘူးပေါ့။
သုတပည့် က တော့ မတရား သဘောကျတယ်. အရာအားလုံး ငါးမူးကို နော်။
သုမှာ က ပိုက်ဆံ ၈သိန်းတောင်ပါလာတာဆိုတော့ တသက်လုံး နေလို့ ရတယ် လို
့ပြောလို့ ရတာပေါ့။ ပြန်မယ့် အချိန်လည်းရောက်ရော တပည့်ဖြစ်တဲ့သူ
ဆရာက ပြောတယ် ဒီမှာ ငါ့တပည့် စဉ်းစားညဏ် မရှိတဲ့သူ အုပ်ချူပ်တဲ့
တိုင်းပြည်မှာ မနေ သင့်ဘူးးးးးးးးးးးတို့ ဘာတို့ ပေါ့လေ။
တပည့် က တော့ နိုးပါ အနော် ကဒီနေရာမှာနေရင် တသက်လုံး ထိုင်စားနေလို့ ရတယ်
ဆရာကြီးရေ ပညာသင်တာ က အဲ့ သလို နေ ဖို့ ပဲလေ တို့ ဘာတို့ ပြော ပြီးတော့
နေချင်ကြောင်းကို ထိုင်ပြောနေတော့ ဆရာ ဖြစ်သူ လက်လျှော့ ရတာပေါ့
ဆရာပြန်ခါနီး သုတပည့်ကို ဂါထာတပုဒ် သင်ပေးလိုက်တယ်
တပည့်ကြီးရေ တကယ်လို့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေ့ နေ ရရင် ဒီဂါထာ ကို တခါရွက်လိုက်
ဆရာရောက်လာမယ် လို့ ပြော ပြီးတော့ ပြန်သွားပါလေရော
တပည့် က လည်း ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျား လို့ ပြော ပြီး အဲ့ဒီ နိုင်ငံမှာ နေခဲ့တော့တာပေါ့
ပြီးတော့ ငါးမူးတန် အစားအစာ တွေ စားရင်နဲ့ မတရား ကြီး ကို ၀လာတယ်.
၀တာမှ တကယ် ကို အကြီးအကျယ် ၀လာတာ.
တရက်မှာ အဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ သူခိုးတယောက် သေဆုံးသွားတယ်
ဘာ လို့ လည်း ဆို တော့အမတ်ချူပ်ကြီးရဲ့ နေ အိမ်ကို အုတ်တံတိုင်း
အပြင်ဘက်ကနေ ပြီးတော့ မြောင်းဖောက်ပြီး ၀င်တာ
အုတ်တံတိုင်း ပြို ကျလို့ ခေါင်းပြားပြီးသေသွားတယ်။
သူခိုးမိန်းမက မကျေနပ်ဘူး ဘုရင် ကြီးကို သွားတိုင်တယ်
းးးးးးးအိုဘယ့် ရေရှင် မြေရှင် ခြံစည်းရိုးပိုင်ရှင် ဘ၀ရှင်
သုခများ မယားကျွေးရန် စီးပွားရှာ ခြင်းသာ ဖြစ် ပေသည်.မရှိသောကြောင့် 
ခိုး မိခြင်း ကို အ ပြစ် ဟု မဆို သင့်ပါအရှင်မင်းကြီးဘုရားပေါ့
အဲ့ဒါနဲ့အမတ်ချူပ် ကြီးကို သေဒဏ် ပေးလိုက်တယ် သေဒဏ်ဆိုတာ က ကြိုးပေးသတ်စေပေါ့
းးးးးးးအရှင်မင်းကြီး ထိုအခြင်းအရာမှာ ပန်းရံဆရာနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်းးးးးးးးးး
ဒါနဲ့ပန်းရံဆရာ ကြိုးပေးခံလိုက်ရရော
ပန်းရံ ကလည်း လျှောက်ပြန်တယ်မှန်လှပါဘုရား အကျွန်နှင့် လားလားမျှသက်ဆိုက်ခြင်းမရှိပါ
ဘိလပ်မြေရောစပ်သူ အလုပ်သမား အသုံးမကျမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်..................
ဘိလပ်မြေရောစပ်သူ ထိုအလုပ်သမားအားယခုချက်ချင်းပင် သေဒဏ်ပေး၍
တရားမျှတမှုကို တည်ဆောက်အံ့ မောင်အလုပ်သမားကလည်းလျှောက်တင်ပြန်တယ်
းးးးးးးးဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးခင်ဗျား ရေထမ်းသမား ရေပို ဖြည့်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်
ရေထမ်းသမားအားသေဒဏ် သူလည်းမခေပါဘူး လျှောက်လိုက်တာကတော့
းးးးးးးးးအရှင်မင်းကြီး အကျွန်ရေဖြည့်ခြင်းမှာ ပုံမှန်သာဖြစ်ပါသည်
အိုးကြီးနေပါသောကြောင့် ရေပို ထည့်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်းးးးးးးးးး
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ရေအိုးကြီးစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီနေ့ က အိုးလုပ်နေတုန်း အင်မတန်တောင့်ဖြောင့်တဲ့ အမျိုးသမီး
အကျွန်ရှေ့က ခဏခဏ ဖြတ်သွားဖြတ် လာလုပ်ပါတယ်
ထိုအမျိုးသမီးအား ငေးကြည့်မိသောကြောင့် အိုးကြီးရ
လာထား ဖြတ်လျှောက်သော ထိုအမျိုးသမီးအား သေဒဏ်
အမျိုးသမီးက ထပ်လျှောက် ပြန်တယ်
းးးးးးးးးးးးးးးမှန်လှပါ ကရုဏာ ကြီးမားလွန်းပြီး
အစွန်းရောက်မိုက်ခြင်းတရားဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို သာယာဝပြောလှစေသူ
ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးရှင် အကျွန်မျိုးမ ဖြတ်လျှောက်ခြင်းမှာ ဒိုဘီအား အ၀တ်အပ်ထား၍
လျှော်ပြီးမပြီး သွားရောင်စစ်စေး ခြင်းသာ ဖြစ်ပါ သည်
မပြီးသောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် သွားမေးရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်းးးးးးးးးးးးးးးး
ဘုရင်ကြီး မိန့်တော်မုပုံ က
းးးးးးးးးးမောင်မင်း အသင်အ၀တ်အစား ကို အချိန်မှီ မလျှော်ဖွပ်နိုင်သောကြောင့်
ထိုမိန်းမအကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ရလေသည် ငေးမိသော အိုးထိန်းသည် ကြောင့် ထိုအိုးသည်
ရေ ဖြည့်သော လုလင်က ရေ ပို ဖြည့်မိလေရာ
ဘိလပ်မြေရောစပ်သောသူ က ရေများများ လောင်း၍ အင်္ဂ့တေ ပျော့သွားသည်
ထို့ ကြောင့် ပင် ပန်းရံဆရာ တည်ဆောင်သော အမတ်ချူပ်ကြီးနေအိမ်
အုတ်တံတိုင်း ပြို ကျ၍ သူခိုးသေဆုံးရလေသည်.
ငါကိုယ်တော်မြတ်၏ သေချာတိကျသော ဆက်ဆပ်တွေးခေါ်မှုကြောင့် အသင်တရားခံ
ပြေးမလွှတ်တော့ချေ အသင်၏ထင်ရှား ကြီးမားလွန်းလှသော ပြစ်ချက်အတွက် သေဒဏ်းးးးးးးးးးးးးး
ကံဆိုးချင်တော့ ကြိုးကွင်းက အသေကြီး အလျှော့အတင်းလုပ်လို့ မရ ဘူး
ဒိုဘီက အရမ်းပိန်လွန်းတဲ့အခါ ကြတော့ ဘယ်လို မှ စွပ်လို့ မရဘူး
ဘုရင်ကြီးက အသိညဏ် ကြီးမားစွာနဲ့ မိန့် တော်မူတယ်
တော်တဲ့ ကောင်ကို ရအောင်ရှာ ပြီး ကြိုးပေးလိုက်ပေါ့းးးးးးးး
ဒီလို နဲ့ မင်းချင်းတို့ ရှာလိုက်ကြတော့ ခုဏက တပည့်ကလေး ကို သွားတွေ့ တယ်
သူက အရမ်းဝနေတော့ ကြိုးကွင်းနဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေ တာ ကိုး
သုကို သေဒဏ် ချလိုက်ရော။
တပည့်က ဆရာပေးတဲ့ ဂါထာကို မန်းမုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဆရာ ချက်ချင်းရောက်လာတယ်
ဆရာ တပည့် နှယောက်က တယောက် ကို တယောက် အချက် ပြ ပြီး
ကြိုးကွင်းထဲ သူဝင်မယ် ငါဝင်မယ် လို့လုနေလိုက်ကြတာမှ မသတ်ရုံ တမယ် ပဲ
လို့ ကို ထင် ရတယ်
ဘယ့်နှယ် သူများတွေ က သေဖို့ ကြောက်နေတဲ့ အ ချိန်မှာ ဒီနှကောင်
ကြိုးကွင်းကို ပြိုင်လုနေရတာတုန်း ဘုရင်ကြီးက မေးလိုက်တာပေါ့
ဘာ လို့ လည်းပေါ့နော် ဆရာက ဖြေတယ်
မှန်လှပါ တရားသဖြင့်လောကပါလနတ်မင်းအား အစဉ် ပြုံးရွှင်စေတော်မူသော် အို
ဗေဒင်သုံးပုံ ကို အရည်ကြို သောက်ခဲ့သူ လည်း ဖြစ် ချေတော့သည်တမုံ
ယနေ့ နက္ခတ် ၊ဂြိုလ် ၊ပက်ကျိ နှင့် ခွေးချီးတို ၏ တည်နေရာအား
ယနေ့ သေသောသူ သည် သည် မလွှဲဧက မုချအမှန် စကြ၀တေးမင်း ဖြစ်လတ္တံ့။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကြိုးကွင်းလုနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သယ်............ငါ ကိုယ်တော်မြတ်ရှိရက်နဲ့ သည်ငမိုက်သားတွေ စကြ၀တေးမင်း
နင်တို့ ဖယ်ကြကွယ်ရို့ ........ဟူသတည်း...........။ :D:D:D
12:48 AM Posted In song Edit This0Comments »
ကြယ်တွေစုံတဲ့ည အဝေ့း အိမ်ကိုလွမ်းတယ်
ကျော်လွန်သွားခဲ့ရင် ပြန်စုံဦးမယ် .....
'' IF ''
8:19 AM Posted In ရင်ထဲက ကဗျာများ Edit This0Comments »
သေခြင်းမတိုင်ခင် (It's make me smile)
12:09 AM Posted In Joke Edit This0Comments »
လူတစ်ယောက် သစ်တောထဲက ဖြတ်လျှောက်လာတုံး ရုတ်တရက်
ကျားကြီးကတစ်ချက်ဟိန်းပြီး ခုန်အုပ်လိုက်တယ်။ သူကအမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ လှည့်
ပြေးပါတော့တယ်။ အစွမ်းကုန်ပြေးနေပေမဲ့ ကျားကလည်း ထက်ချပ်မကွာပြေး
လိုက်လာနေတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ တောင်ကမ်းပါးအစပ်နားထိ ရောက်လာ တယ်။
ပေါက်နေတဲ့ ဆီးပင်။ ဆီးသီးတွေ ပင်လုံးပြည့် သီးနေလေရဲ့။
ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ ဟောက်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အောက်က
သူ့ကိုမော့ကြည့်နေတာ အတိုင်းသား မြင်လိုက်ရတယ်။ ရင်ထဲ "ဖိုကနဲ"
တုန်သွားတယ်။ တစ်ချက်ပြန်တွေးကြည့်ပြန်တော့ ကျားပဲဖြစ်ဖြစ်၊
ဘာမှမထူးဘူးလို့ တွေးမိသွားပြန်တယ်။ စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချလိုက်နိုင်ချိန်မှာဘဲ
အသံတချို့ ကြားရပြန်တယ်။ ကြွက်နှစ်ကောင်က ဆီးကိုင်းကို ကိုက်နေတဲ့ အသံဘဲ။
ရုတ်တရက် တစ်ချက်ပြာသွားပေမဲ့ ချက်ခြင်းပြန်ပြီး ငြိမ်သက်သွားတယ်။ သစ်ကိုင်းကို
တော်သေးတယ်လို့တွေးမိ သွားတာကိုး။ စိတ်ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားတော့
ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ ဆီးသီးမှည့်တွေချည်းပဲဆိုတာ သေချာမြင်မိတော့ တယ်။
ဆီးသီးမျိုး မစားခဲ့ဖူးဘူးလို့ သူခံစားမိတယ်။ သုံးထောင့်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့
ဘယ်လိုမှမအောင့်မစောင့်နိုင်တော့တဲ့အဆုံး ကမ်းပါးပေါ်က ဟိန်းဟောက်ရင်း
လိုက်ပြီးခုန်ချသွားတယ်။ ကြွက်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ကောင်က ကျားဟိန်းသံကြောင့်
လည်တဆန့်ဆန့်နဲ့ မျှော်ကြည့်နေတယ်။ နေ့လယ်နေခင်းနဲ့
ညဉ့်နက်သန်းကောင်တို့နဲ့တူတဲ့ ကြွက်အဖြူနဲ့အမဲတို့ဟာ ခဏတာဘ၀ရဲ့
ခန္ဒာကိုယ်ကို တစ်လှည့်စီကိုက်ဖြတ်နေတယ်။ တနေ့နေ့မှာတော့ ခြင်္သေ့ကြီး
BeautyMax Magazin မှ မောင်မောင်လှိုင် ၏ စာပုဒ်လေးပါ။
Copy from forward mail.
1:28 AM Posted In ရင်ထဲက ကဗျာများ Edit This0Comments »
3:09 AM Posted In ချစ်သူများနေ့သမိုင်း Edit This4Comments »
Valentine's Day ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာတယ်..။
ဒါကတော့ လူတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာတော့ " . . ချစ်သူများနေ့ . . " " . . ချစ်သူများနေ့ . . " မရိုးနိုင်အောင်ပြောနေ ကြပေမယ့် .. ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာ သလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကို မသိကြသေးတဲ့သူတွေ တော်တော်များများ ရှိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်တော် သိသလောက် ၊ဖတ်မိသလောက် ပြောပြချင်ပါတယ်... သိပြီးသား ကိုကိုမမများကလဲ သိထားတာလေးတွေရှိရင် ဝေဖန်ခဲ့ပါဦးလို့..။
Claudius ဟာစဉ်းစားတယ် ယောကျာ်းတွေဟာ မိသားစုသံယောဇဉ်ကြောင့် စစ်ထဲမဝင်ချင်ကြတာပဲ သူတို့သာ အိမ်ထောင်မပြုကြရင် စစ်ထဲဝင်ကြမှာပဲလို့ မိုက်မိုက်မဲမဲတွေးမိတယ်..။ ဒါကြောင့်ပဲ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လူငယ်တွေ အိမ်ထောင်မပြုရလို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်..။ လူငယ်တွေ အတွက် ရက်စက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ဥပဒေပေါ့...။
သူဝမ်းမြှောက်သွားတာ တစ်ခုရှိတယ် သူထောင်ထဲမှာရှိစဉ် ရောမမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ထောင်ထဲကို လာတွေ့ကြတယ် ပြတင်းပေါက်မှာ ပန်းတွေ ကြဲကြ မှတ်စုလေးတွေရေးကြ တယ်..။ ပြီးတော့ သူလုပ်ခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်း၊ သူတို့လေးတွေလည်းအချစ်ကို ယုံကြကြောင်း အားပေးထောက်ခံကြတယ်..။ အဲ့ဒီ့ထဲမှာ ထောင်မှုးကြီးသမီးလဲပါတာပေါ့..။ ထောင်မှုးကြီး က ခွင့်ပြုတာကြောင့် သူ့ရဲ့ အခန်းထဲမှာ လာတွေ့တယ် စကားတွေ အများကြီးပြောတယ်.။ အားပေးစကားတွေပြောတယ်.. နောက် သူသေခါနီးမှာ သူမရဲ့ ခင်မင်မှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ အားပေးမှု တွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ "Love from your Valentine." ဆိုတဲ့ မှတ်စုတိုလေး တစ်စောင် ထိုအမျုိးသမီးတွက်ရေးထားခဲ့တယ်..။
"" . . Valentine's Day . . "" ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်..။
American အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ တစ်နှစ်ကို သန်းတစ်ထောင်သော Valentines တွေပို့ကြတယ်..။ Christmas လက်ဆောင်ပြီးရင်တော့ ဒုတိယအများဆုံးပေါ့..။ အဲဒီ့ထဲမှာ အမျုိးသမီးတွေက ဝယ်ကြတာ ၈၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတဲ့...။
(Submit from forward mail. Thanks to writer)
9:46 AM Posted In ရင်ထဲက ကဗျာများ Edit This 1 Comment »
ရွှေတိဂုံဘုရား အလှူခံပုံး ကန်ထရိုက်မပေးဟု
3:43 PM Edit This0Comments »
မင်းနိုင်သူ/ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၉
ရွှေတိဂုံဘုရားအလှူခံပုံးများအား တနှစ်လျှင် သိန်းငါးထောင်ဖြင့် ဘာသာခြားတဦးပိုင် ကုမ္ပဏီတခုသို့ ကန်ထရိုက်ပေးထားသည်ဆိုသည်ဟု ပြောဆိုရေးသားနေခြင်းမှာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း ရွှေတိဂုံဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
"ကျနော်အတွင်းရေးမှူးပါ။ အတိအလင်းပြောပါတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်လည်း မလုပ်ပါဘူး။ လုပ်လည်း မလုပ်အပ်ပါဘူး။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလည်း လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဘယ်လောက်ရတယ်။ ဘယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ လုပ်ရတာ တွေလေ။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သိချင်ရင် တရားဝင်မေးလိုက်ပါ" ဟု ဦးဝင်းကြိုင်က ပြောသည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင် အမည်မသိ အမျိုးသမီးတဦးအသွင်ဖြင့် ရွှေတိဂုံဘုရားအား ပြည်သူများ အလှူငွေမထည့်ချင်အောင် ရေးသားဝါဒဖြန့်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန် ဆရာတော်တပါးအား လျှောက်ထားရာ
"ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖန်တီးဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရွှေတိဂုံကို ပြည်သူတွေ အကြည်ညှိပျက်အောင် ရေးတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလို ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိတဲ့ အရေးအသားတွေကြောင့် အတိတ်က ဘာသာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သတိနဲ့ ချင့်ချိန်ဖတ်ကြရင် ကောင်းမယ်" ဟု အမိန့်ရှိသည်။
နိုင်ငံခြားသား ၀င်ရောက်မှုမှရရှိသော နိုင်ငံခြားငွေများကိုလည်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဘဏ်တွင် စာရင်းဖွင့်အပ်နှံကာ ဂေါပကအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဘုရားကြီး၏လိုအပ်မှုများတွင် ပြန်လည် သုံးစွဲနေပါသည်ဟုလည်း ဦးဝင်းကြိုင်က ပြောသည်။
ယောက်ျား မိန်းမ အဘိဓာန် 2
2. ချစ်သူရဲ့ ခန္တာကိုယ်အလေးချိန် နဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်း များကို မလှောင်ပါနှင့်
(Writer say : တကယ်ကိုယ်တွေ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေမို့ ပြန်မျှဝေတာပါ)
တစ်ဘက်ကမ်းမှ မြင့်မိုရ်တောင်တွင် တည်ရှိ၏။
ထိုအခါဝယ် ကျွန်ုပ်တွင် လှေတစ်စင်းရှိ၏
၎င်းလှေအား ခန္တီပင်လယ်၌ လှော်ခတ်၍
ချစ်ခြင်း၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့်
မိဘ၏ ပန်းမာလာ ဥယာဉ်လောက်
အဘယ်သာ အေးမြသာယာပါအံ့နည်း .....။